Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo » I-Seychelles yoKhenketho kunye ne-Emirates Airlines ibamba iGCC Media
Airlines • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Ukwakha kwakhona • Iindaba zaseSeychelles ezaphulayo • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba eziHlangayo ze-UAE
I-Seychelles kunye ne-Emirates ibamba iGCC Media
Njengenxalenye yobambiswano lwabo lwamva nje, Iinqwelomoya zaseSeychelles kunye neenqwelomoya zeEmirates ziququzelele uhambo lweentsuku ezi-3 ukusukela nge-26 ukuya kwi-29 ngo-2021 ka-Septemba, ziqhelanisa nabameli bezindlu zeendaba ze-GCC ezidumileyo ngobuhle kunye nomtsalane weZiqithi zeSeychelles.
I-Seychelles isungule iphulo elibanzi lokwakha kwakhona ukuzithemba kukhenketho oluya kwilizwe.
Ingalo yezokhenketho iqhube uhambo lokuqhelanisa namajelo eendaba kwi-GCC.
Kubonakaliswe ugxininiso lwesizwe ekuqinisekiseni impilo kunye nokukhuseleka kweendwendwe kunye nezo zabakhenkethi, abasebenzi, kunye nabantu bendawo.
Ababhaleli beKhaleej Times, iGulf News, iEmarat Al Youm kunye ne-Kul Al Usra, bonke babebanjelwe e-LXR Mango House Seychelles, ihotele entsha yaseMahé yokutyela e-Anse aux Poules Bleues kunxweme olusentshona-ntshona lwesiqithi esikhulu.
Inxalenye yephulo elibanzi lokunceda ukwakha ukuzithemba uhambo oluya kwiziqithi zeparadesi zoLwandlekazi lwaseIndiya kwaye ubonise ukuzibophelela kwenqwelomoya ekuboneleleni ukufikelela kwiindawo ezikumgangatho ophezulu, olu hambo lwamva lokuqhelaniswa nemithombo yeendaba lubonise ezona mveliso zintle kunye namava ngelixa kugxininiswa kugxilwe kwisizwe ekuqinisekiseni impilo kunye nokhuseleko lwabakhenkethi kunye nabasebenza kwezokhenketho, abasebenzi , kunye nabemi bendawo.
Ukuthetha ngentsebenziswano, i Seychelles yoKhenketho Ummeli eDubai, u-Ahmed Fathallah, uthe: “Ubudlelwane bethu neenqwelo moya ze-Emirates bukhule buqina kwaye bazibophelela ekuhambeni kwexesha. Sinelungelo lokuzibonela ngawethu amabala amangalisayo okubona iziqithi, kunye nokufumana ubunzima benkcubeko kunye nobuhle bokuntywila baseSeychelles; yayilibaleke ngokwenyani, kwaye ndiyathemba ukuba nabanye baya kuba nakho ukuyifumana. Ngobambiswano lwamva nje oluqhubekayo, sizakuqhubeka ukubonelela ngamava afanayo awenzelwe wena kunye nokukhunjulwa kubo bonke abo bafuna ukuhamba ngokukhuselekileyo.
Ubambiswano lobuchule phakathi kwe-Seychelles yoKhenketho kunye ne-Emirates luquka uthotho lwamaphulo osasazo ajolise ikakhulu kwingingqi ye-GCC, ngoku emi njengeyona ndawo yentengiso ephambili yesiqithi.
#kwakha # uhambo